Moe Nay | Page 2
မမ…. ငါ … ဖေဖေနဲ့ တွေ့ခဲ့တယ်။ ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို ၀မ်းသာအားရ ပြေးမဖက်ခဲ့ပါဘူး။ ၀မ်းနည်းပက်လက် လည်း မငိုကြွေးခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုလေးပဲ တွေ့ခဲ့တာပါ။ ဖေဖေ နောက်အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ပြီ ဆိုတာကော နင်သိလား။ နောက်အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တာကို အပြစ်မပြောပါဘူးဟာ။ ပြုလိုက်တာ ကောင်းပါတယ်။ ငါတို့ကလည်း ဖေဖေနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်မှ မနေနိုင်တာ။ ဒါပေမယ့်လည်း ……..။
ဖေဖေက ငါတို့ကို မဆက်သွယ်ခဲ့ဘူးနော်။ မြို့ကလေးမှာ သူရှိနေတာတောင် ငါတို့ကို အဆက်အသွယ် မလုပ်ဘူးဟ။ ငါကလည်း ချော်တော်ငေါ့ပြီး ရောက်သွားတာပါ။ ဘယ်တုန်းကမှ ငါတို့အပေါ် နွေးထွေးမှုမရှိတဲ့ မြို့ကလေးက သူ့ထုံးစံကို မဖျက်ပါဘူး။ စိမ်းစိမ်းကားကားပါပဲ။ ငါ တောင်ကြီးက ဆင်းလာတော့ ဦးလေးနီကားနဲ့ ဆင်းလာတာလေ။ ကားပေါ်က ဆင်းဆင်းချင်း ဘယ်မှမ၀င်ဘဲ.. အိမ်ကလေးဆီကို တန်းသွားမိတာဟ။ ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်က သွားချင်လို့လေ
အိမ်ထဲမှာ လူရှိနေတဲ့ အရိပ်အရောင်ဆိုတော့ ငါ အံ့သြသွားတယ်ဟ။ အဲဒီအိမ်လေးမှာ လူမရှိတာ(လူမနေတာ) ငါ့တစ်သက်ပဲ မဟုတ်လား။ ထူးဆန်းတယ်ဆိုပြီး ခြံတံခါးဖွင့်ဝင် လိုက်တာ။ ဖေဖေ့ကို ဒီအိမ်လေးမှာ ပြန်တွေ့ရမယ်လို့ လုံးဝမျှော်လင့်မထားမိဘူး။ ပြီးတော့ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ကောလေ။ ငါ ခြံထဲဝင်လိုက်တော့ လူတစ်ယောက် ထွက်လာတယ်။ အဲဒါ ဖေဖေ။ ငါ.. ကြောင်သွားတယ်။ ရုတ်တရက်ဆိုတော့ ဘာစကားမှ ထွက်မလာပါဘူး။ ဖေဖေက `ဘယ်တုန်းကရောက်လဲ … သမီးငယ်။ အိမ်ထဲဝင်လေ´ တဲ့။ ငါက `အခုပဲ။ အခုပဲ ရောက်တာ´လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ ဧည့်သည်တစ်ယောက်လို ဧည့်ခန်းထဲ ၀င်ထိုင်လိုက်တယ်။ ခဏကျတော့ မိန်းမတစ်ယောက် ထွက်လာတယ်။ ဖေဖေက မိတ်မဆက်ပေးဘူး။ ငါကလည်း မမေးပါဘူး။ ဖွင့်ပြောစရာမလိုဘဲ သိနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေက အများကြီး မဟုတ်လား။
ဖေဖေနဲ့ ငါ စကားနည်းနည်း ပြောဖြစ်တယ်။ တကယ့်ကို နည်းနည်းလေးပါ။ ဖေဖေက `အဆင်ပြေတယ် မဟုတ်လား။ သမီးကြီးကော။ သားကြီးကတော့ ဖေဖေ့ဘ၀ထဲက ထွက်သွားပြီ´တဲ့။ ဒါပါပဲဟာ။ ငါတို့ ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေက။ (သားကြီးက ဖေဖေ့ဘ၀ထဲက တရားဝင်ထွက်သွားပြီ ဆိုပေမယ့် ကျန်ခဲ့တဲ့သမီးနှစ်ယောက်ကလည်း ဖေဖေ့ဘ၀ထဲကနေ တရားမ၀င် ထွက်သွားရတာပဲ မဟုတ်လား။) နှစ်ပေါင်းများစွာ ဝေးကွာနေတဲ့ အဖေနဲ့ သမီးကြားမှာ ပြောစရာစကားလုံးတွေပျောက်ဆုံးပြီး အကြောင်းအရာမရှိတာ တော်တော် ထူးဆန်းတယ်နော်။ ပြီးတော့ ဖေဖေနဲ့ ထမင်းလက်ဆုံစားဖြစ်တယ်။ ဖေဖေ့ရဲ့ သက်ဆိုင်သူနဲ့ ကောပေါ့။ အမှတ်တရအနေနဲ့ပါ။ ဘ၀မှာ မချိုမြိန်တဲ့ နောက်ထပ် ထမင်းတစ်ပိုင်းပေါ့ဟာ။ နောင်ဘယ်အချိန်မှာ ပြန်တွေ့ရမလဲဆိုတာ မသိနိုင်ဘူးလေ။ ဒါကြောင့်ပါ။ သေချာတာတစ်ခု ကတော့ ငါ နောက်ထပ် ပြန်လာဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲ။
ဖေဖေ့ကို နှုတ်ဆက်ပြီး ထွက်လာခဲ့တယ်။ ဘယ်အိမ်မှာ အိပ်ရင်ကောင်းမလဲ။ ရွာသွားရင် ကောင်းမလားပေါ့ စဉ်းစားရင်း လမ်းလျှောက်လာခဲ့တယ်။ အဘွားတို့အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ ငယ်ငယ်တုန်းက ပျော်ရွှင်ခဲ့တာတွေကို သွားသတိရလိုက်သေးတယ်။ အဘွားတို့အိမ်ကလည်း တကယ်ကို ယိုယွင်းနေပါပြီဟာ။ သိတယ်မဟုတ်လား။ အေးလေ … ငါတို့အတွက် အလုံခြုံဆုံး၊ အနွေးထွေးဆုံးလို့ ထင်ထားခဲ့တဲ့ ငါတို့ရဲ့ အိမ်ကလေးကတောင် အစိမ်းရောင်တွေ လွှမ်းခြုံထားတာ ဆိုတော့ ….။
ငါ.. ဘယ်အိမ်မှာမှ မအိပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဘယ်သူနဲ့မှလည်း မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ စကားလည်း မပြောချင်ပါဘူးဟာ။ မေးခွန်းတွေကိုလည်း မဖြေချင်ဘူးလေ။ ကရုဏာသက်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့ မျက်ဝန်းတွေနဲ့လည်း ရင်မဆိုင်ချင်ဘူးဟ။ နောက်ဆုံးအခေါက် ဗင်ကားနဲ့ တောင်ကြီးပြန်တက်လာခဲ့တယ်။ တောင်ကြီးရောက်တော့ ညနေစောင်းနေပြီဟ။
မေမေ့အိမ်ကိုလည်း မသွားချင်ဘူး။ မေမေနဲ့လည်း မတွေ့ချင်ဘူး။ ဖေဖေနဲ့မေမေက ကိုယ်ပိုင်မိသားစုဘ၀တစ်ခုစီနဲ့ နေသားကျပျော်ရွှင်နေတာ့ .. အခုအချိန်မှာ အဲဒီမြင်ကွင်းကို ထပ်မမြင်ချင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဖေဖေ့ရဲ့ မိသားစုက ငါတို့မိသားစုမဟုတ်သလို၊ မေမေ့မိသားစု ကလည်း ငါတို့ မိသားစု မဟုတ်ဘူးလေ။ Home Sweet Home လို့ ခေါ်တွင်တဲ့ ငါတို့အတွက် လုံခြုံနွေးထွေးမယ့်အိမ်ကလေးက ဘယ်ဆီမှာ ရှိမှန်း မသိဘူးလေ။ မရှိဘူး ထင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ရွှေကမ္ဘာကားနဲ့ မန္တလေး ဆင်းလာခဲ့တယ်။ မန္တလေးရောက်တော့ မြစ်ကြီးနားသွားရင် ကောင်းမလား စဉ်းစားလိုက်သေးတယ်။ မသက်ဆီကိုလေ။ ဒါပေမယ့်လည်း… မသွားဖြစ်ပါဘူးဟာ။ မန္တလေးမှာ တနေကုန်နေပြီး ညကားနဲ့ ရန်ကုန် ပြန်လာခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်မြို့က အိမ်လို့ ငါတို့ အမည်ပေးထားတဲ့ တိုက်ခန်း ကျဉ်းကျဉ်းလေးဆီကိုပဲ ပြန်လိုက်တယ်။
ဒီနေရာလေးက ဗလာကျင်းနေတဲ့ ငါတို့အတွက် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒီနေရာလေးမှာ မေးခွန်းတွေမရှိဘူး။ မျက်ဝန်းတွေကိုလည်း ဘာသာပြန် နေစရာမလိုဘူး။ ပကတိ အရှိတရားနဲ့ နေလို့ရတယ်လေ။
Posted in ၀တ္ထု |3Comments »
ဒီည … တကယ်အိပ်လို့ရမှာပါ
ဒီည … တကယ်လို အိပ်လို့ရမှာပါ
ငါ့ မူးမြစ်တို့ ကူးလူးဆက်သွယ်
ည ပင်လယ်မြို့တစ်မြို့မှာ ရေတိမ်တွေနစ်ခဲ့ဖူးပြီ။
နွေအဆင့်ဆင့်ကို ဖြတ်သန်းအပြီးမှာ …။
…. သွေးချင်းတူသူ ငါ့လိုလူတို့ရေ
၃၁ ဘုံမှာငါ လူဖြစ်ခဲ့တာ သေချာပြီဆိုရင်
Posted in ကဗျာ |3Comments »
15 ရက်သား … ယင်မနားလေး…
ကျွန်တော် ကမ္ဘာလောကကြီးထဲကို ခြေချပြီး 15ရက်မြောက်တဲ့နေ့။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ကမ္ဘာပျက်တဲ့နေ့ပေါ့၊။ မေမေနဲ့ကျွန်တော့်ကို ကံဇာတ်ဆရာက ခွဲပစ်လိုက်တယ်။ မေမေ့ရဲ့ နို့ချိုရည်ကို ကျွန်တော် ၀၀လင်လင်တောင် မစို့လိုက်ရသေးဘူး။ မေမေ့ရင်ခွင်မှာ တိုးဝှေ့ချွဲနွဲ့လို့တောင်မှ မ၀သေးဘူး။ ကံကြမ္မာရယ် ရက်စက်လိုက်တာ။ ဘာမှ ပြန်မပြောဘဲ သူစီရင်သလို စီရင်တတ်တဲ့ အဲဒီကံကြမ္မာဆိုတဲ့အကောင်ကြီးကိုပဲ လက်ညှိုးထိုးလိုက်မိတယ်။
ကျွန်တော့်ကို သူတို့ ခြင်းတောင်းတစ်တောင်းထဲထည့်ပြီး မေမေနဲ့ ဝေးရာကို ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော် အော်ဟစ်ငိုယိုမိတယ်။ မေမေ . . မေမေ လို့လည်း အော်ခေါ်ရင်းပေါ့။ မေမေကလည်း ကျွန်တော့်ကိုမျက်ရည်တွေဝေသီနေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေနဲ့ စိုက်ကြည့်နေတယ်။ ကျွန်တော် ၀မ်းနည်း လိုက်တာ။ မေမေကလည်း ၀မ်းနည်းပက်လက်နဲ့ `ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး . .သားရယ်´လို့ ပြောနေသလိုပဲ။ မေမေ . . .က တဖြည်းဖြည်း . .ဝေး ဝေးပြီးကျန်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် အော်ဟစ်ငိုယိုရလွန်းလို့ အသံတောင် မထွက်တော့ဘူး။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် မောမောပန်းပန်းနဲ့ အိပ်ပျော်သွားတယ်။
သိမ့်ခနဲဖြစ်သွားပြီး ကျွန်တော်လန့်နိုးလာတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလန့်တကြားဝေ့၀ဲကြည့်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်လုံးဝမသိတဲ့ ဒေသစိမ်းတစ်ခုကို မထင်မှတ်ဘဲ တွေ့လိုက်ရတယ်။ ကြောက်လွန်းလို့ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးလည်း တဆတ်ဆတ်တုန်နေတယ်။ ရှိရှိသမျှအင်အားနဲ့ မေမေ့ကို အော်ခေါ်ပြီး ရှာဖွေမိတယ်။ အရင်ဆို ကျွန်တော်က ကြောက်ရင် မေမေ့ရင်ခွင်မှာ ပြေးပုန်းနေကျလေ။ အခုတော့ မေမေမရှိတဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်ရောက်နေတယ်။ မေမေနဲ့ ကျွန်တော် ဘယ်တော့မှ ပြန်တွေ့ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော် သိလိုက်ရတဲ့အချိန် . . .`မေမေရယ် . .သားကို ကယ်ပါဦး။ သားကြောက်လိုက်တာ။´ ကျွန်တော်ထပ်ပြီး ငိုမိတယ်။ ၀မ်းနည်းမှုတွေကလည်း တလှိုက်လှိုက်နဲ့။ မေမေကတော့ ကြားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အရင်လို အကာအကွယ်လည်းပေးနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ သေချာတာ တစ်ခုကတော့ မေမေလည်းကျွန်တော့်ကို စိတ်ပူနေမှာပါ။ အားမတန်လို့သာ မာန်လျှော့လိုက်ရတာပါ။ ဘယ်မိဘကမှ ကိုယ့်သားသမီးကို စွန့်လွှတ်ချင်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ။
ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော် အားတင်းလိုက်တယ်။ ခြင်းတောင်းထဲက မရဲတရဲလေးထွက်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို စူးစမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ မနီးမဝေး မှာ နို့တစ်ခွက်နဲ့ ထမင်းတစ်ပန်းကန်တွေ့လိုက်ရတယ်။ ထမင်းနံ့ရမှပဲ ကျွန်တော် ထမင်းမစားရသေးဘူးဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ အရမ်းကို ဆာလောင်မွတ်သိပ်လာတယ်။ ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်ပြီး ထမင်းပန်းကန်နား တိုးကပ်လိုက်တယ်။ ရုတ်တရက်ခြေထောက်တစ်စုံကိုတွေ့တော့ လန့်ဖြတ်ပြီးခြင်းတောင်းထဲ အပြေးပြန်ဝင်လိုက်တယ်။ ဆာကလည်းဆာ ကြောက်ကလည်းကြောက်နဲ့ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ အရမ်းလည်း ၀မ်းနည်းမိတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော် မငိုပါဘူး။ မငိုမိအောင်အားတင်းထားတယ်။ မေမေက ပြောတယ်လေ။ ယောက်ျားဆိုတာ မငိုရဘူးတဲ့။ သတ္တိရှိရမယ်တဲ့။ မေမေ့ကိုချစ်ရင် မေမေ့စကားကို နားထောင်ရမှာပေ့ါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် မငိုတော့ပါဘူး။ `မေမေ . . .သား မငိုဘူးနော်´
ကျွန်တော် ခေါင်းကိုမော့ ရင်ကိုကော့ပစ်လိုက်တယ်။ ခြေလှမ်းမှန်မှန်နဲ့ ခြင်းတောင်းထဲကထွက်ပြီး ထမင်းပန်းကန်ဆီကို တန်းတန်းမတ်မတ်သွားလိုက် တယ်။ ဘယ်ကိုမှ ဘယ်သူ့ကိုမှ ကြည့်မနေတော့ဘူး။ ဟုတ်တယ်လေ။ ကြည့်မိရင် ကျွန်တော်ကြောက်မိမှာ သေချာတယ်။ စားစရာရှိတာကို အေးအေးဆေးဆေး ငုံ့စားနေလိုက်တယ်။ ကျွန်တော် ဆက်ပြီး အသက်ရှင်နေဖို့အတွက် အစာစားမှဖြစ်မယ်လေ။ နောက်နွားနို့ခွက်နား တိုးကပ်သွားမိတယ်။ နို့ခွက်ကို ကြည့်ပြီး ဘယ်လိုသောက်ရမလဲ စဉ်းစားမိတယ်။ ကျွန်တော်က နို့ကို စို့ပဲ စို့တတ်တာ။ ဒီလို တစ်ခါမှ မသောက်ဖူးဘူးလေ။ ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ `ဟေ့ကောင် …. မင်း အခု ကလေးလေး မဟုတ်တော့ဘူး။ မင်းဘ၀ မင်းဆက်လျှောက်ရမယ်။ မင်းကို နို့ချိုတိုက်ကျွေးမယ့် မင်းမေမေလည်း အနားမှာမရှိတော့ဘူး။ မင်းကိုလည်း ဘယ်သူမှ အကာအကွယ်ပေးမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ မင်းရောက်တဲ့အရပ်မှာ နေတတ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။´
ကျွန်တော် နို့ကို ငုံ့သောက်လိုက်တယ်။ ပါးစပ်တစ်ခုလုံးပေကျံသွားတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သောက်လို့ အဆင်ပြေလာပါတယ်။ အရင်က မေမေ့နို့ချိုကို စို့ရသလောက်တော့ မကောင်းဘူးပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နို့လေးသောက်ရတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်နေမိတယ်။ အမှန်တကယ်ဆို ကျွန်တော်က နို့ပြတ်သေးတဲ့ကောင်မှ မဟုတ်တာ။ ဗိုက်ထဲ အစာဝင်သွားတော့ ကျွန်တော် နည်းနည်းနေသာထိုင်သာရှိလာတယ်။ မျက်လုံးတွေစင်းပြီး အိပ်ချင်လာတယ်။ အနာဂတ်အကြောင်းက ခေါင်းထဲရောက်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အခု ဘာမှ မစဉ်းစားချင်သေးဘူး။ အဲဒီအကြောင်း ခေါင်းထဲက ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ဒီနေ့အဖို့ ကျွန်တော်ခံစား ရတာတွေ သိပ်များနေပြီ။ ကျွန်တော်အနားယူဖို့ လိုအပ်နေပြီလေ။ ကျွန်တော်အိပ်လိုက်မှဖြစ်မယ်။ ကျွန်တော် အားပြည့်မှဖြစ်မယ်။ အခု ကျွန်တော်က 15ရက် သား ကလေးလေးမဟုတ်တော့ဘူး။ 15ရက်သား လူကြီးဖြစ်နေပြီလေ။ ကျွန်တော်ရှေ့လျှောက်ရမယ့်လမ်းမှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေတွေ့မလဲဆိုတာ မသိဘူး။ ကျွန်တော့်ဘ၀ကို တည်ဆောက်ဖို့ အားအင်အပြည့်ဖြစ်နေဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ သိပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့နားခိုရာ ကမ္ဘာသစ်လေးက ကျွန်တော့်အပေါ် စိမ်းကားရက်စက်မနေပါဘူး။ သူတို့က ကျွန်တော့်အပေါ်ကို နွေးထွေးမှု ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း နေရာသစ်မှာ နေသားတကျပျော်ရွှင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ သူတို့က ကျွန်တော့်ကို တော်တော်လည်းချစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်သူတို့ကို မကျေနပ် တာ တစ်ခုရှိတယ်။ ကျွန်တော့်ကို `ယင်မနားလေး´လို့ ခေါ်တာလေ။ အဲဒီလိုခေါ်ရင် ကျွန်တော်က ပြန်မထူးဘဲ ပေကပ်နေလိုက်တယ်။ အဲဒီအခါကျတော့လည်း သူတို့က `ဒီကောင်က ကြောင်စကားလည်း မတတ်တဲ့ကောင်၊ လူစကားလည်း မသိတဲ့ကောင်´ဆိုပြီး ကောင်းချီးပေးကြတယ်လေ။ ကျွန်တော်စိတ်တိုလိုက်တာ။ အမှန်ဆို နာမည်လှလှလေးတစ်လုံးတော့ ကျွန်တော့်ကို ပေးသင့်တာပေါ့။ ဒီလို မလှမပတဲ့နာမည်မျိုးတော့ မလိုချင်ပါဘူး။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်ပါတယ်လေ။ ကျွန်တော်ကလည်း ကျွန်တော်။ တစ်ချိန်လုံး ခုန်ပေါက်ပြေးလွှားဆော့နေတာ။ အိပ်ချိန်နဲ့ စားချိန်ကလွဲရင် နားတယ်ရယ်လို့မှ မရှိတာ။ တစ်ခါတလေသူတို့က ကျွန်တော်ကစားနေတဲ့ပုံကို ဗီဒီယိုရိုက်ထားတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ပဲအပြည့်နဲ့ ပို့စ်အမျိုးမျိုးပေးပြီး ဆော့တော့တာပေါ့။ အဲဒီအခါကျတော့လည်း ကျွန်တော်က မင်းသားဖြစ်ပြန်ရော။
သူတို့က နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း အပြင်ထွက်နေတာ။ အမြဲတမ်းလိုလို အိမ်မှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း ကျန်ခဲ့တာများတယ်။ အဲဒီလိုအချိန်မျိုးဆိုရင် မေမေ့ကို အရမ်းလွမ်းတာပဲ။ ကိုကိုနဲ့ မမတို့ကိုရောပေါ့။ ကျွန်တော့်မိသားစုမှာ ကျွန်တော်က အငယ်ဆုံးလေ။ မေမေရယ် . .ကျွန်တော်တို့ မောင်နှမတတွေ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆော့ကစားခဲ့တာတွေ၊ မေမေ့နို့ချိုရည်ကို လုပြီး သောက်စို့ခဲ့တာတွေ ပြန်ပြီးလွမ်းဆွတ်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေ ဆိုတာ ပြန်မရနိုင်တော့ဘူးလေ။ ဘ၀ဆိုတာကလည်း ခွဲခွာခြင်းတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့အရာလေ။ ကျွန်တော်မေမေနဲ့ အခု မခွဲရလည်း တစ်ချိန်ချိန်တော့ ခွဲရမှာပါပဲ။ ဘယ်သူမှ ရှောင်လွှဲလို့မှ မရတာ။
သူတို့အပြင်က ပြန်လာပြီဆိုရင် ကျွန်တော် ပျော်လည်း အရမ်းပျော်တယ်။ မကျေမနပ်လည်း ဖြစ်မိတယ်။ မကျေနပ်တာက ကျွန်တော့်ကို တစ်ယောက်တည်း ပစ်ထားခဲ့လို့လေ။ အဲဒီအခါကျရင် ကျွန်တော် သူတို့ခြေထောက်ကို ပြေးကိုက်ပစ်လိုက်တယ်။ တကယ်နာအောင်တော့ မလုပ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ခံစားချက်ကို သိသာရုံလေး ပါးပါးလေးပဲ ပြလိုက်တာပါ။ အဲဒီလိုအခါမျိုးဆို သူတို့က ထွက်ပြေး၊ ကျွန်တော်က လိုက်နဲ့ ၀ရုန်းသုန်းကား ဖြစ်နေတယ်။ ပျော်စရာလည်း ကောင်းပါတယ်။ သူတို့က ကျွန်တော့်ကို `ဟဲ့ .. ယင်မနား။ နင်က ကြောင်လား… ခွေးလား… မျောက်လား´တဲ့။ ခုန်ပေါက်ဆော့ပြီး ကိုက်ဆွဲတတ်တဲ့ ကျွန်တော့်ကို ကောင်းချီးပေးကြတာလေ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ အခုဆိုရင် ဒီနေရာသစ်လေးမှာ ကျွန်တော် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ နေတတ်နေပါပြီ။ တစ်ခါတစ်ခါတော့လည်း မေမေတို့ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် သတိရပြီး ၀မ်းနည်းမိတဲ့ နေ့ရက်တွေတော့ ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်မှ မဖြစ်နိုင်တော့တာ။ လမင်းကြီးနဲ့ ဝေးလို့ ငိုကြွေးနေရင် ကျွန်တော် ကြယ်ကလေးတွေနဲ့ပါ ထပ်ပြီး ဝေးရတော့မှာပေါ့။ မေမေကလည်း ကျေနပ်မှာပါ။ ကျွန်တော် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ဘ၀ကို ရှေ့ဆက်လျှောက်နေတယ်ဆိုတာကိုလေ။
Posted in ၀တ္ထု |5Comments »
နာနာဘာဝတို့ ….. ကမ္ဘာ ။ ။
ငရုတ်သီးဆိုတဲ့ ကျုပ်ရဲ့ သဘောသဘာဝကတော့ စပ်မှာပဲ။ စားဖို့မစားဖို့ကတော့ ခင်ဗျားတို့ သဘော။ စားရင် စပ်မယ်။ မစားရင် မစပ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒါကို ခင်ဗျားတို့က စားလည်းစားသေး၊ စပ်တယ်လို့လည်း အပြစ်တင်သေးတယ်။ ကျုပ်ကတော့ ကျုပ်ကို ပေးထားတဲ့ တာဝန် ကျေပွန်အောင်လုပ်ရမှာပဲ။ ကျုပ်လည်း ကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်မှာ နေထိုင်တဲ့ သက်ရှိတစ်ဦးကိုဗျ။ ကိုယ့်ကိုပေးထားတဲ့ တာ၀၀န်တော့ ဦးလည်မသုန် ထမ်းရွက်ချင်တာပေါ့။ ခင်ဗျားတို့ လူသားတွေမှာမှ တာဝန်ရှိတာ မဟုတ်ဘူး။ အခုကျတော့ ခင်ဗျားတို့လူသားတွေက မြည်းတစ်ကောင်နဲ့ သားအဖနှစ်ယောက် ကျနေတာပဲ။ ဘယ်ဟာမှ အပြစ်မလွတ်ဘူး။ စပ်တော့လည်း ကျုပ်ကို ၀ိုင်းပြီး မေတ္တာပို့တယ်။ ဟော.. မစပ်တော့လည်း ခင်ဗျားတို့က ပြောလိုက်တာ မှိုချိုးမျှစ်ချိုး။ ရစရာကို မရှိဘူး။ ဒီကြားထဲ ငရုတ်သီးက ငရုတ်သီးမပီသဘူးဆိုတာက ပါသေးတယ်။ ကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်က ဒါမျိုးဆို နည်းနည်းမှ ခံချင်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ကျုပ်ရဲ့ အစွမ်းကို ပြသတော့လည်း ခင်ဗျားတို့ လူသားတွေက မခံနိုင်ကြဘူး။ တော်သေးတာ ပေါ့။ ကျုပ်မှာလည်း ကျုပ်ကို ချစ်ခင်အားပေးနေတဲ့သူတွေ ရှိနေသေးလို့ပေါ့။ ဘာတဲ့။ ခင်ဗျားတို့ လူသားတွေပဲ ပြောပြောနေကြတာလေ။ လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ကို အပြည့် အ၀ထောက်ခံနေသူ အနည်းဆုံးတစ်ယောက်ရှိရင် အားပြည့်တယ်ဆိုလား။ ပြည့်စုံတယ် ဆိုလားပဲ။ ကျုပ်လည်း ခင်ဗျားတို့ရဲ့ စကားကို ယူသုံးပြီး ပြောရမှာပဲ။ ကျုပ်ကို အားပေး နေတဲ့သူတွေအတွက် ဆက်လက်ရှင်သန်ရဦးမှာပဲ။ ငရုတ်သီး ပီသရဦးမှာပဲ။ ကျုပ်ကို ငရုတ်သီးဖြစ်ပြီး စကားကြီးစကားကျယ်ပြောတယ်လို့တော့ မထင်နဲ့။ ကျုပ်တို့ငရုတ်သီး တွေလည်း ခင်ဗျားတို့ လူသားတွေနဲ့ အနေနီးခဲ့တာ ကြာပါကောလား။ ရေကြောမြေကြောလိုက်တယ်ဆိုတာလေ။ ခင်ဗျားတို့နဲ့ အတူတူနေနေမှတော့ ခင်ဗျားတို့လောက်နီးနီး ပြောနိုင်မှ တော်ကာကျမယ်။ မဟုတ်ရင် ခင်ဗျားတို့တွေက နှိမ်လွန်းအားကြီးတယ်။ ကမ္ဘာလောကကြီးမှာ ခင်ဗျားတို့ လူသားတွေပဲ ရှိတာကျနေတာပဲ။ လူသားပါဝါပြလွန်းအားကြီးတယ်။ ကျုပ်ကလည်း ဒါမျိုးဆို ငုံ့မခံတတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ကျုပ်တို့လည်း ကျုပ်တို့ရှိတဲ့အားနဲ့တော့ အစွမ်းပြန်ပြရတာပေါ့။ မဟုတ်ရင် ငရုတ်သီးအစွမ်းအစညံ့ရာကျတော့မှာပေါ့။ ကျုပ်လို ကောင်မျိုးကတော့ ခင်ဗျားတို့ လူသားတွေကို ပခုံးချင်းယှဉ်ရဲပါတယ်။ ငရုတ်သီးဖြစ်ပြီး ငရုတ်သီးမပီသတဲ့ကောင်တွေကို ကျုပ်က သိပ်မုန်းတာ။ အဖက်လုပ်ပြီးတောင် စကား ပြောချင်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဖုတ်လေတဲ့ငပိ ရှိတယ်လို့ကို သဘောထားတာ။ ဒီလိုကောင်စားမျိုးတွေကြောင့် ကျုပ်တို့ငရုတ်သီးမျိုးတွေ သိက္ခာကျနေရတာ။ ငါးခုံးမ တစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံးပုပ်နေရတာ။ ဘယ်နှယ့်ဗျာ။ ငရုတ်သီးပီပီသသပေါ့။ အခုတော့ မဟုတ်ပေါင်။ စပ်ချင်သလိုလို မစပ်ချင်သလိုလို လုပ်နေတယ်။ ပြောရင်းနဲ့ ကျုပ်ဒီကောင်တွေကို ဒေါသထွက်လွန်းလို့ သတ်ပစ်ချင်လာပြီ။ ငရုတ်သီးမှန်ရင် စပ်ရမယ်။ မစပ်ရင် ငရုတ်သီးဘ၀မှာ မနေနဲ့။ ဒါပဲ။ ကျုပ်ရဲ့ခံယူချက်ကတော့။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကျုပ်က ကျုပ်တို့လို ငရုတ်သီးပီသတဲ့ကောင်တွေနဲ့ပဲ ငရုတ်သီးလောကကို တည်ဆောက်ချင်တာ။ အေးလေ… ကျုပ်က ဘာတတ်နိုင်မှာမို့လဲ။ လောကကြီးက ဒီလိုပါပဲဆိုပြီး ကျုပ်ကိုယ်ကျုပ် ဖြေသိမ့်နေရတယ်။ ကျုပ်အသက်ရှင်နေသေးသရွေ့တော့ ကိုယ့်အလုပ်ကို တာဝန်ကျေအောင်တော့ လုပ်ရမှာပဲ။ ဒါမှ ကျုပ်ရဲ့ရှင်သန်မှုက လိပ်ပြာသန့်မယ်လေ။
(မှတ်ချက်။ ။ အလွန်တရာမှမနေနိုင်မထိုင်နိုင်အောင် ပူးပြင်းစပ်ရှလှသော ငရုတ်သီးတောင့်အား စားမိပြီးသကာလ ထွက်ပေါ်လာသော အတွေးတစ်စကို ဆွဲထုတ်ခြင်း)
Posted in တွေးမိတွေးရာ |5Comments »